Muxuu Yahay Ujeedka Ahlu Sunna Ee Dagaalka » Axadle Wararka Maanta
Muxuu yahay ujeedka Ahlu Sunna ee dagaalka
Dhuusamareeb (Axadle) – Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunna Waljamaaca ayaa si faah faahsan uga hadlay xiisadda u dhexeysa ciidamadooda iyo kuwa Galmudug ee ka taagan gobollada dhexe ee dalkeena.
Shaakir oo wareysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa marka hore ku eedeeyey dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug in meeshii ay kala dagaalami laheyd kooxda Al-Shabaab ay soo weerartay Alhu Sunna, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale wuuxuu Sheekhu faah faahiyey ujeedada ay dib ugu soo laabteen Galmudug oo ay hadda ka wadaan abuul ciidan, wuxuuna tilmaamay inay doonayaan in loo midooobo Al-Al-Shabaab, si looga saaro deegaanada ay weli ka joogaan gobolada Galgaduud iyo Mudug.
“Hadafkeena ugu weyn ee aan ka leenahay waddankeena Soomaaliya, gaar ahaan Galmudug waxaa weeye in loo midoobo khawaarijta Al-Shabaab, lagana xoreeyo waddanka oo idil, Ummaddana ay hesho amni hadafkeeno kaas weeye,” ayuu yuri Sheekh Shaakir.
Waxa kale oo uu shaaca ka qaaday in madaxda Galmudug ay ka gaabiyeen mas’uuliyaddii loo igmaday, isla-markaana ‘ay NJO iska noqotay’ shaqadii maamulka.
“Galmudug system-keedii ayaa waxa uu noqday NJO dibadda inta looga yimaado mas’uuliyaa laga qaato haddane lala cararo. Mas’uuliyad Ummaddii loogu khidmeynayo ma aysan noqonin marka sidaas daraadeed in la helo mas’uuliyiin Ummadda u adeegayo oo diyaar u ah inay dadka wax u qabtaan taas waa muhiim,” ayuu sii raaciyey.
Ugu dambeyn wuxuu hoosta ka xariiqay in aysan carqalad ku aheyn Galmudug horumarkeeda, balse ay doonayaan kaliya in la helo amni iyo xasiloonid waarta.
“Annagu ma nihin kuwa Galmudug carqalad ku ah ee waxaan ka shaqeyneynaa amnigooda iyo horumarkooda, ” ayuu markale wareysigan ku yiri hoggaamiyaha Ahlu Sunna.
Hadalkan ayaa kusoo aadayo, iyada oo ciidamada taabacsan Ahlu Sunna ay la wareegeen magaalooyinka Guriceel iyo Matabaan, taas oo uga sii dartay xiisadda ka taagan Galmudug.